Isifundo e-Ukraine - Esemthethweni Ukrainian Ukwamukelwa Centre. Ayikho Izivivinyo
Isifundo Engineering e
Kuyinto choice esifanele ikusasa lakho
FUNDA KABANZI Sebenzisa manje
Ingabe ufuna ukuba udokotela emhlabeni waqaphela?
izinga okusezingeni and low ukufundisa Imali
Ayikho TOEFL / IELTS
Ukrainian Ukwamukelwa Centre kuvumela abafundi ukufunda emayunivesithi Ukrainian ngaphandle izivivinyo
Ukrainian Ukwamukelwa Centre kuvumela abafundi ukufunda emayunivesithi Ukrainian ngaphandle yokwemukelwa
Uma yokuvuma kuwe nge-Ukrainian Ukwamukelwa Centre, bese uzothola isiqinisekiso visa zemfundo Ukraine
Usukulungele Isifundo e-Ukraine?
Mayelana Inqubo Ukwamukelwa
Ukrainian Ukwamukelwa Centre yinhlangano esemthethweni esisiza abafundi ukuze bayosebenzisa futhi ucwaningo eyunivesithi ethile Ukrainian. Sisiza abafundi kusuka Isinyathelo sokuqala (nokukhethwa inyuvesi) ukuhlala isikhathi eside (iziqu).
Ukrainian Ukwamukelwa Centre yasungulwa ngokukhethekile abafundi international ukwenza inqubo ukungena yabo nemfundo emayunivesithi Ukrainian njengoba elula, enembile futhi lihlale kahle ngangokunokwenzeka.
Mayelana Ukrainian Ukwamukelwa Center
Ungakhetha noma yiliphi inyuvesi Ukrainian. Uma ungakwazi ukunquma, thina njalo ekulungele ukusiza ukuba ukhethe eyunivesithi engcono ngokukhethekile ngawe
LaseKharkov University of yasebhange
Ukraine cituated maphakathi eYurophu nase yilona zwe elikhulu kunawo kuwo.
Ukraine ihlale ivulekile, ngobuqotho futhi ujabule ukuxhumana nabantu bakwamanye amazwe.
izinga okusezingeni eliphezulu lemfundo
amanyuvesi Ukrainian inikeza izinga European imfundvo inombolo enkulu amakhono.
Isimo sezulu sikahle
Uzoba induduzo ngasiphi isikhathi sonyaka. Winter ukuxwayisa futhi ihlobo akuyona kushisa kakhulu.
Imfundo e-Ukraine iyona eshibhe Europe. It is ngempela abiza ngempumelelo.
Akubona abesifazane abahle
abesifazane Ukrainian ungomunye amahle kakhulu emhlabeni.
Sihlala ngikuxoxele zonke izibuyekezo Eduacation Ukrainian
Ukwamukelwa 2017-2018 ivuliwe!
abafundi Dear abazoba! Siyajabula ukukwazisa, ukuthi Ukwemukelwa amanyuvesi Ukrainian ngoba 2017-2018 elivulekile manje. Ungafaka isicelo inthanethi manje ukubhuka isihlalo inyuvesi. Amanyuvesi uqale ukuthumela izincwadi isimemo kusukela ngoMashi. Khetha Esemthethweni Ukrainian Ukwamukelwa Centre bese isiqinisekiso yokwemukela engcono amanyuvesi Ukrainian! Ozithobayo, Isi-Ukranian…
Ukwamukelwa 2016-2017 ivulekile Ukraine
abafundi Dear abazoba, inqubo Ukwamukelwa I- 2016-2017 ngonyaka elivulekile manje. Kulo nyaka kukhona okuningi surprices ezinhle. Kulo nyaka e-Ukraine wavula ehhovisi Admission.Center osemthethweni. Ngakho, lokhu abafundi ngonyaka ingasebenza nakunoma imaphi Ukrainian directlty inyuvesi nge-Ukrainian Ukwamukelwa Centre. It kuvumela abafundi ukuba kusheshiswe umsebenzi wokwamukela futhi okuqinisekisiwe…
Isibuyekezo sokugcina:25 April 19